Waa kuma Ra’iisal Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya ? – GOBOLADA.COM
June 18, 2022 June 18, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Waa kuma Ra’iisal Wasaaraha Cusub ee Soomaaliya ?
Agaasimaha Machadka Heritage ee fadhigiisu yahay Magaalada Muqdisho, Prof. Afyare Cabdi Cilmi oo markii u horeysay ka hadlay magacaabista Ra’iisul Wasaaraha cusub ee dalka, Xamza Cabdi Barre ayaa sheegay inay Soomaaliya uga dhigan tahay inay u jiheysatay siyaasadda xisbiyada.
Prof. Afyare ayaa sheegay in magacaabista Xamza ay sare u qaadeyso awoodda xisbiyada, taasi oo siyaasadda ka dhigeysa mid leh aragti iyo jiho ka badalan middii sanadaha badan lagu hogaaminayay dalka, sida uu hadalka u dhigay.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya u magacaabay Xamza Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, horena u soo noqday xoghayihii xisbiga madaxweynaha ee UPD sanadihii u dhexeeyay 2011-2017.